Nnukwu ọrụ dị n'obi ihe niile anyị na -eme, na ebumnuche ime ka nrụpụta dị mfe. Site na kọntaktị mbụ gị na anyị, ruo nnyefe nchekwa nke akụkụ omenala gị, anyị na -elekọta ọrụ gị. Na -enye gị oge iduzi ngwa ngwa oge niile, ezigbo mma na uru pụtara ìhè.
Anyị na -ewepụ esemokwu n'agbụ ọkọnọ site n'ịghọ ndị otu na -akwado nrụpụta gị na imepụta akụkụ site na iji ụlọ nrụpụta CNC nke nwere oke ike. Obi dị anyị ụtọ inye ndị ahịa anyị CNC Machining Services na ọtụtụ ndị ọzọ na Japan, Europe, United States, Saudi Arabia, wdg.
Akụkụ ndị CNC na -arụ ọrụ nwere ike ịdịgasị iche na mgbagwoju anya. Site na akụkụ atụmatụ dị mfe ruo na -achọ, jiometrị gbagọrọ agbagọ nke ukwuu, ọ dị mkpa ịhọrọ igwe CNC ziri ezi maka ọrụ ahụ. Ụdị igwe CNC dị iche iche dị, enwere ike iji ya maka akụkụ dị iche iche.
A ga -ekpebi ụdị igwe eji eme ihe (CNC lathe, 3 axis CNC milling machine ma ọ bụ 4/5 axis machining center, wdg) site na mgbagwoju anya nke akụkụ ahụ. Ihe mgbagwoju anya akụkụ, jiometrị na akụkụ na-emetụta ụdị igwe ahọrọ, n'akụkụ ntachi obi, iji ngwaahịa eme ihe na ụdị ihe.
N'ikwu okwu nke ukwuu, akụkụ dị mgbagwoju anya ga -achọ nlebara anya karịa n'oge igwe n'ihi nhazi ya, akụkụ ya na ihe ndị ọ chọrọ. Ndị injinia imewe kwesịrị mgbe niile, ebe enwere ike, rụọ ọrụ iji mepụta akụkụ dị mfe, dị mfe imepụta akụkụ ebe akụkụ ahụ nọ na nhazi nhazi. Dị ka imewe ya dị nfe, ọ ga -adịrị ya mfe imepụta, na, na ndabara, ọnụ ahịa dị n'elu ga -adị ọnụ ala.
Ndị na -emepụta igwe na -atụle mgbe niile ka esi emepụta atụmatụ chọrọ obere ihe mgbe ha na -enye arụmọrụ kacha. Nke a nwere ike ịbelata ọnụ ahịa ebe ọ na -ahụkwa arụmọrụ yana nrụpụta dị elu.
Ọdịdị nke ihe dị iche iche na-echebara ndị na-emepụta igwe echiche mgbe niile, yana ihe ndị nwere arụmọrụ dị elu nke a haziri nke ọma ga-atụle oge nhazi igwe. Injinia nkenke nwere ike belata ihe egwu nke njehie mmadụ na -ebutekarị. Obere njehie na nha, ogbugbu ma ọ bụ mmepụta nwere ike ibute ọrụ na ngwaahịa kpamkpam. N'iburu nke a n'uche, ọ bara uru ịhụ na gị na ndị nrụpụta nwere ahụmịhe, ndị injinia na ndị nrụpụta na -arụ ọrụ.
N'ikwu nke ahụ, a ga -achọ igwe nrụpụta CNC dị mgbagwoju anya, ebe oke izi ezi na imecha nwere ike bute oge ndu ogologo. Ọchịchị n'ozuzu ya bụ na 4/5 axis CNC Machining ga -adị mkpa maka akụkụ dị mgbagwoju anya na ụdị dị mgbagwoju anya. Nke a bụ n'ihi na igwe nwere ike rụọ ọrụ na 4/5 akụkụ/axes dị iche iche iji nweta ụdị ikpeazụ, kama abụọ ma ọ bụ atọ na -arụ ọrụ naanị X na Y.
Site na ịtinye anyụike atọ ọzọ, A, B na C, enwere ike ịhazi akụkụ ndị ka zie ezi ma dịkwa mgbagwoju anya, na-enweghị mkpa iji aka tinyegharịa akụkụ ahụ n'ime igwe. Eziokwu ahụ na igwe axis 5 axis nwere ike ịnye 'otu nrụpụta' bụ nnukwu uru na-ebelata oge.
Ngwaọrụ dị elu na ndị ọrụ nwere ahụmịhe nwere ike inye aka hụ na enwere ike imepụta akụkụ achọrọ yana ezigbo nsonaazụ yana oge ndu ngwa ngwa. Ọ bara uru ịkpọtụrụ onye nrụpụta nwere ahụmahụ ka ị jụọ maka ike igwe ha na otu ha ga -esi nyere gị aka. Na BMT, anyị nwere ike ịnye Quote 24 Hour n'efu; lee otu anyị nwere ike isi nyere aka na oru ngo gị taa. Weta ya.
Nke gara aga: Ngwa akụrụngwa igwe CNC
Osote: Ihe Ndị Na -emetụta Mgbagwoju Otu Akụkụ
Akụkụ igwe anaghị agba nchara CNC
Igbe galvanized, Omenala igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ, Akụkụ Ngwa CNC, High-End mpempe akwụkwọ Metal Parts ngwaahia, Akara akpaghị aka, Igwe eji arụ ọrụ titanium,